Magacyada ajaanib ka tirsan kooxda gaalaynta Muslimiinta oo lagu diley weerar - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Magacyada ajaanib ka tirsan kooxda gaalaynta Muslimiinta oo lagu diley weerar
Magacyada ajaanib ka tirsan kooxda gaalaynta Muslimiinta ee lagu diley weerar. Wararka ka imaanaya Gobolka S/Hoose ayaa sheegaya in Ciidamada kumaandooska Soomaaliya ee Danab ay Howlgalo qorsheysan ka fuliyeen degaanada Baladul Amiin iyo Hanti wadaag .
Saraakiisha oo la hadashay codka raadiyaha ciidanka ayaa sheegay in hawlgalkaas lagu diley 85 maleeshiyaad iyo horjogayaal isugu jira Soomaali iyo Ajaanib been loogu sheegay in jihaad ka jiro dalka.
Magacyada Saraakiisha Ajaaniibta ah ee dagaalkaasi lagu dilay ayaa waxaa ka mid ah: Abuu Xamsa Bin Shaam oo ka soo jeeda dalka Masar wuxuuna Shabaabka u qaabilsanaa Tababarada Maleyshiyada, Aweys Abu Xamza Almifsali oo heysta dhalashada dalka Tanzania, Abuu Bilaal Zubeyr ayaa heysta Dhalashada Mauritania wuxuuna horay u ahaa ku xigeenka Ibraahim Afgaan, Aadan Abuu Musiyaan oo ka soo jeeda dalka Suuriya iyo Feysal Bin Hayaan oo ka soo jeeda dalka Yaman.
Waxay Saraakiisha Ciidamada Danab intaas raaciyeen in goobta weerarka laga fuliyay ay ahayd saldhigyo lagu tababaro dhalinyarada kooxda gaalayntu maskaxda ka soo bedeshay oo ku biiraayay gaaleynta Muslimiinta.